Guubie: ny sehatra marketing amin'ny mailaka 59 $ isan-taona | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 26, 2013 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Guubie dia nanomboka tamin'ny beta ary mety hampihetsiketsika ny tontolon'ny marketing amin'ny mailaka miaraka amin'ny sarany $ 59 isan-taona, manomboka eo API mailaka an'i Mandrill. Faly aho mahita ireo orinasa lafo vidy miditra amin'ny ady amin'ny marketing amin'ny mailaka. Eto amin'ity bilaogy ity, ohatra, dia nandoa indroa heny ho an'ny serivisy mailaka izahay noho ny an'ny anay fampiantranoana premiere.
The Guubie Ny Marketing Marketing Platform dia misy:
Fanentanana amin'ny marketing amin'ny mailaka - Mamorona fanentanana amin'ny marketing mailaka izay zaraina amin'ny mpampiasa anao. Asao ny olona hamaky ny atiny ary hirotsaka amin'ny alàlan'ny mailaka sy ny tambajotra sosialy. Mandefasa mailaka mahasarika sy mahaliana amin'ny maodelin'ny mailaka mamaly.
Deliverability avo - Ampifandraiso amin'ny serivisy fandefasana mailaka tianao i Guubie, toa an'i Mandrill, MailJet, Amazon SES na SMTP hafa. Ohatra, raha mampiasa Mandrill ianao dia afaka mandefa mailaka maimaim-poana hatramin'ny 12,000 isam-bolana.
Tatitra mandroso sy antontan'isa - Ampiasao ny Analytics manao tatitra sy mampifangaro azy ireo amin'ny Google Analytics isaky ny fampielezan-kevitra hanome anao ny fampahalalana rehetra ilainao.
ROI tsara kokoa miaraka amin'ny fitsapana A / B - Mamorona andrana A / B tsy manam-petra hanampy anao hahafantatra ny hafatra mahomby indrindra ampitaina amin'ireo mpampiasa anao.
Browser & Mac OSX / Windows App - Amin'ny alàlan'ny browser mahazatra toy ny Firefox, Safari na Google Chrome, azonao atao ny miditra amin'ny Guubie sy ny fiasa rehetra ao aminy, na aiza na aiza misy anao eto amin'izao tontolo izao. Raha mila fidirana finday ianao dia azonao atao ihany koa ny misintona ny fampiharana Guubie ho an'ny Mac OSX na Windows.
Miorina amin'ny hetsika - azonao atao ny mamorona trangam-panafody handefa tsingerintaona nahaterahana ho an'ireo mpanjifa anao na koa mailaka fandraisana roa faharoa roa andro aorian'ny namoronana kaonty ny mpampiasa. Ataovy mandeha ho azy ny adidinao amin'ny varotra.
API ho an'ny mpamorona sy fanombohana - Guubie dia manana API XML Mahery, izay midika fa afaka mampiditra mora foana ny sehatra sy serivisiny amin'ny kaonty Guubie ny mpandrindra.
miaraka Guubie, mandoa iray ianao, sarany isan-taona ambany… $ 59!
Tags: amazona sesmailakaguubieambany vidinymandrill
Fepetra azo jerena: horonan-tsary sy haino aman-jery azo
Vondrona Marketing Franchise
Sep 26, 2013 ao amin'ny 4: PM PM
Saribakoly 59 isan-taona dia mora ary raha mandeha tsara dia mangalatra. Handeha tsy maintsy hijery an'io bebe kokoa fa mahaliana azo antoka.